ESI HAZIE ASUS RT-N10 RAWỤTA - NETWORK NA INTANETI - 2019
Esi hazie Asus RT-N10 rawụta
Akwụkwọ ntuziaka a ga-ekpuchi usoro niile a ga-achọ iji hazie Asus RT-N10 Wi-Fi rawụta. Nhazi nke onye na-ahụ maka ikuku wireless maka ndị ọrụ Rostelecom na Beeline, dịka ndị kasị ewu ewu na mba anyị, ga-atụle. Site na nyocha, ị nwere ike ịhazigharị onye router maka ndị na-enye Ịntanetị ndị ọzọ. Ihe niile achọrọ bụ ịkọwapụta ụdị na njedebe nke njikọ ahụ nke onye na-enye gị nyere. Akwụkwọ ntuziaka dị mma maka Asus RT-N10 - C1, B1, D1, LX na ndị ọzọ. Hụkwa: ịtọlite ​​rawụta (ntụziaka niile sitere na saịtị a)
Otu esi ejikọ Asus RT-N10 iji hazie
Nbudata Wi-Fi Asus RT-N10
Ọ bụ ezie na ajụjụ ahụ yiri ka ọ bụ nke mbụ, mgbe ụfọdụ mgbe ọ na-abịakwute onye ahịa ahụ, ọ ghaghị inwe ọnọdụ nke ọ na-ejighị jikọta Wi-Fi router naanị ya n'ihi ihe kpatara na ejiri ya jikọọ ya ma ọ bụ onye ọrụ ahụ echeghị na nuances abụọ .
Esi esi jikọọ Asus RT-N10 router
N'okpuru Asus RT-N10 router ị ga-ahụ ọdụ ụgbọ mmiri ise - 4 LAN na 1 WAN (Intanet), nke na-apụta megide izugbe. Ọ bụ ya na ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla ga - ejikọta Rostelecom ma ọ bụ Beeline. Jikọọ otu n'ime ọdụ ụgbọ mmiri LAN na kọntaktị netwọk na komputa gị. Ee, ịmepụta onye na-agbanye router ga-ekwe omume na-enweghị njikọ wired, ọ nwere ike ime ọbụna site n'ekwentị, ma ọ ka mma - ọ nwere ọtụtụ nsogbu ndị nwere ike ime maka ndị ọrụ novice, ọ ka mma iji njikọ jikọtara iji hazie.
Ọzọkwa, tupu ị gaa n'ihu, ana m akwado ileba anya na netwọk njikọ netwọk mpaghara na kọmputa gị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ dịbeghị mgbe ị gbanwere ihe ọ bụla n'ebe ahụ. Iji mee nke a, ọ dị mkpa ka ị mee usoro ndị a dị mfe iji:
Pịa bọtịnụ Win + R ma tinye ncpa.cpl na window "Run", pịa "Ok".
Right-click on your LAN connection, nke a na-eji na-ekwurịta okwu na Asus RT-N10, wee pịa "Njirimara".
Na njirimara nke njikọ mpaghara dị na ndepụta "Akụkụ a na-eji njikọ a", chọta "Usoro Ịntanetị mbipute 4", họrọ ya wee pịa bọtịnụ "Njirimara".
Lelee na atọrọ ntọala ka ị nweta adreesị IP na DNS na-akpaghị aka. Echere m na nke a bụ maka Beeline na Rostelecom. N'ọnọdụ ụfọdụ, na maka ụfọdụ ndị na-enye ọrụ, ụkpụrụ ndị dị n'ọhịa ekwesịghị naanị iwepụ ya, kama edekwara ebe ọzọ ka e nyefee ya na ntọala nke router.
Na njedebe ikpeazụ nke ndị ọrụ na-asụgharị mgbe ụfọdụ - malite ịhazi router, kwụpụ Beeline gị ma ọ bụ Rostelecom njikọ na kọmputa n'onwe ya. Nke ahụ bụ, ọ bụrụ na ị malite "Njikọ dị elu Rostelecom" ma ọ bụ njikọ Beeline L2TP iji jikọọ na Ịntanetị, gbanyụọ ha ma ghara ịgbanye ha ọzọ (gụnyere mgbe ị haziri Asus RT-N10). Ma ọ bụghị ya, onye rawụta agaghị enwe ike ịmepụta njikọ (ọ bụrịrị arụnyere na kọmpụta) na Internet ga-adị na PC, ma ngwaọrụ ndị ọzọ ga-ejikọta site na Wi-Fi, ma "enweghị ohere na Ịntanetị." Nke a bụ nsogbu kachasị mma na nsogbu nkịtị.
Tinye Asus RT-N10 ntọala na ntọala njikọ
Mgbe emechara ihe niile dị n'elu ma tinye ya n'ọrụ, malite na ihe nchọgharị Ịntanetị (ọ na-agba ọsọ, ọ bụrụ na ị na-agụ nke a - mepee otu taabụ ọhụrụ) ma banye na ntanetị 192.168.1.1 - Nke a bụ adreesị ụlọ iji nweta ntọala nke Asus RT-N10. A ga-agwa gị ka ị tinye aha njirimara na paswọọdụ. Ịbanye nbanye na paswọọdụ iji banye ntọala nke netwọk Asus RT-N10 - admin na admin na mpaghara abụọ. Mgbe ntinye ziri ezi, enwere ike ịjụ gị ka ị gbanwee paswọọdụ ndabara, mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ peeji nke ibe weebụ nke ntọala nke Asus RT-N10 router, nke ga-ele anya dị ka foto dị n'okpuru ebe a (ọ bụ ezie na nseta ihuenyo gosipụtara nhazi ihe rawụta).
Ntọala ntọala Asus RT-N10
Ịhazi njikọ Beeline L2TP dịka Asus RT-N10
Iji hazie Asus RT-N10 maka Beeline, soro usoro ndị a:
Na ntọala ntọala nke router na ekpe, họrọ ihe "WAN", wee dee ihe niile dị mkpa maka njikọ (Ndepụta nke parameters maka beline l2tp - na foto na ederede n'okpuru).
Ụdị njikọ WAN: L2TP
Nhọrọ IPTV: họrọ ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụrụ na ị na-eji Beeline TV. Ọ ga-adị mkpa ka ị jikọọ igbe dị n'elu na ọdụ ụgbọ mmiri a.
Nweta Adreesị IP WAN na akpaghị aka: Ee
Jikọọ na DNS nkesa na-akpaghị aka: Ee
Aha njirimara: gị Beeline nbanye iji nweta Ịntanetị (na akaụntụ nkeonwe)
Paswọdu: paswọọdụ gị Beeline
Obi-Beat Server ma ọ bụ PPTP / L2TP (VPN): tp.internet.beeline.ru
Hostname: efu ma ọ bụ beeline
Mgbe pịa "Mee". Mgbe oge dị mkpirikpi, ma ọ bụrụ na e mehiere, onye ntanetị Wi-Fi Asus RT-N10 ga-eme njikọ na Ịntanetị ma ị ga-enwe ike imepe saịtị na netwọk. Ị nwere ike ịga na ihe ahụ gbasara ịtọpụta netwọk wireless na router a.
Njikọ njikọ njikọ Rostelecom PPPoE na Asus RT-N10
Iji hazie redio asus RT-N10 maka Rostelecom, soro usoro ndị a:
Na menu na ekpe, pịa ihe "WAN", mgbe ahụ na ibe nke meghere, jupụta na ntọala njikọ na Rostelecom dị ka ndị a:
Ụdị njikọ WAN: PPPoE
Nhọrọ IPTV: Họrọ ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi Rostelecom IPTV telivishọn. Jikọọ n'ọdụ ụgbọ mmiri a na igbe ntanetị nke TV n'ọdịnihu
Nweta adreesị IP na-akpaghị aka: Ee
Aha njirimara: nbanye gị Rostelecom
Paswọdu: Paswọọdụ gị bụ Rostelecom
Ihe ndị ọzọ fọdụrụ nwere ike ịhapụ agbanwe agbanwe. Pịa "Mee." Ọ bụrụ na ezughị ntọala ahụ maka ogige Aha njikwa efu, tinye rostelecom n'ebe ahụ.
Nke a mezigharịrị ntọala njikọ Rostelecom. Ngwaọrụ ahụ ga-eme ka njikọ dị na Ịntanetị, ihe niile i nwere ime bụ ịtọ ntọala nke netwọk Wi-Fi wireless.
Ịhazi Wi-Fi na router Asus RT-N10
Ịhazi ntọala nke netwọk Wi-Fi wireless na Asus RT-N10
Iji hazie netwọk ikuku na ngwaọrụ a, họrọ "netwọk ikuku" na menu Asus RT-N10 n'akụkụ aka ekpe, wee mee ntọala ndị dị mkpa, a na-akọwa ụkpụrụ ya n'okpuru ebe a.
SSID: Nke a bụ aha netwọk ikuku, ya bụ, aha ị na-ahụ mgbe ị jikọtara site na Wi-Fi site na ekwentị gị, laptọọpụ ma ọ bụ ngwaọrụ ikuku ọzọ. Ọ na-enye gị ohere ịmata ọdịiche netwọk gị n'aka ndị ọzọ nọ n'ụlọ gị. Ọ bụ ihe amamihe dị na iji Latin na nọmba.
Usoro nyocha: A na-atụ aro ka ịtọọ uru nke WPA2-Personal dịka nhọrọ kacha mma maka iji ụlọ.
Keyboard pre-shared WPA: ebe ị nwere ike ịtọ paswọọdụ Wi-Fi. Ọ ghaghị ịgụ ma ọ dịkarịa ala asatọ ederede Latin na / ma ọ bụ nọmba.
Agaghị agbanwe agbanwe nke fọdụrụ na Wi-Fi wireless netwọk.
Mgbe ịtọcharala njedebe niile, pịa "Mee" na ichere ka echekwaa ma rụọ ọrụ.
N'oge a, ntọala Asus RT-N10 zuru ezu ma ị nwere ike jikọọ site na Wi-Fi ma jikwa Ịntanetị na-enweghị ike site na ngwaọrụ ọ bụla na-akwado ya.